Ngilanda kanjani iMicrosoft Excel 2003? - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Main > Imibuzo Evame Ukubuzwa > Landa i-excell 2003 - izixazululo ezintsha
Landa i-excell 2003 - izixazululo ezintsha
Ngilanda kanjani iMicrosoft Excel 2003?
Ukufaka lokhudownload:Landaifayela ngokuchofoza ifayela le-Landalink (ngenhla). Khetha ifayela bese uligcina kwi-hard disk yakho.
Imiyalo yokusetshenziswa: Vula le dokhumenti ku-IMicrosoftIZwi ukuyifunda noma ukuyiphrinta.
Ukususa lokhudownload: Susa lo mbhalo kwikhompyutha yakho.
Okthoba 5 2007
Chofoza u-Download'Download Statistics, kodwa ngiyilandile ngakho-ke ngayeka. Vele uvule ifayela olilandile. Qhafaza kwesokudla kuso bese ukhipha amafayela iphasiwedi eyi- www.mysoftwarefree.com wonke ama-alphabets mancane bese uqhafaza u-ok uvule bese uhlola ukuthi i-pc yakho ingama-32 bit noma angama-64 bit, ukubheka, qhafaza kwesokudla kwi-PC bese uya ku-PC properties lapho ungabona khona uhlelo olusebenzayo lwe-64 bit ngakho-ke kufanele sikhethe ukusetha kabusha okungama-64 bit futhi manje iMicrosoft Excel 2010 ifakiwe ngempumelelo, chofoza Vele uchofoze Vala bese usesha iMicrosoft Excel.
Lapha ungabona ukuthi iMicrosoft Excel 2010 ifakwe ngempumelelo
Ngingayilanda i-Microsoft Excel mahhala?
Izindaba ezimnandi ukuthi, uma ungadingi isethi ephelele ye-IMicrosoftAmathuluzi angama-365, wenacanfinyelela kuzinhlelo zokusebenza zayo eziku-inthanethi zemahhala- kufaka phakathi iZwi,I-Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Ikhalenda kanye ne-Skype. Nakhu ukuthi ungabathola kanjani: Iya ku-Office.com. Ngena ngemvume ku-IMicrosoftaccount (noma yakhela eyodwamahhala).Meyi 1, 2021
Ingabe i-MS Office 2003 Imahhala?
Ayikho inguqulo ye-I-Microsoft Officekuyintomahhalakepha izinhlobo 2007 kuya ku-2016 ziqinisekisiwe ziyahambisana Windows 10.Ihhovisi 2003futhi phambilini kuzosebenza kepha akuqinisekisiwe ukuhambisana.12 Meyi 2016
Ngingayibuyekeza kanjani i-Excel 2003 iye ku-2007?
Uma uhlelo lwakho lunezidingo ezisezingeni eliphansi (bheka Amanothi), ungathuthukisaikhophi lakho le-Office2003ngqo eHhovisi2007.
Faka idiski yokufaka noma chofoza kabili ku-Office elandiwe2007ifayela.
Khetha 'Thuthukisa 'inketho bese uqhafaza ' Okulandelayo. '
Uma ujwayelene ne-Excel 2003, ukushintshela ku-Excel 2010 kungaba yinto ehlukumezayo, kepha ukwazi lezi zindawo eziyisithupha ezisemqoka kuzosusa ubuhlungu obuningi kuqala, okukhombisa ukuthi isoftware efanayo kakhulu i-interface entsha yomsebenzisi.
Izindaba ezimnandi ukuthi zonke izinketho zakho zakudala zokubala-ukubalwa nokuhlelwa kwazo azikashintshi zonke lezo zinto kunesixhumi esibonakalayo esisha, iribhoni esesiphezulu kwesikrini, nazo zonke ezinye izindlela ezintsha zokwenza izinto ezizenzayo kunengqondo kunalokho izindlela zakudala ngaphandle kokuthi unolwazi olunzulu ngohlelo oludala lapho-ke kuyacasula kepha umlingiswa omusha wakhiwa kusuka phansi kunokuthi uvele ngokungahleliwe njengakudala futhi ngokuhamba kwesikhathi uzothola ukuthi imiyalo ebidinga ukuchofoza kathathu manje idinga okubili, obekungaba umsebenzi wokuchofoza manje sekulula kakhulu ukutholakala futhi obekungcwatshwa kwimenyu manje sekuphambili naphakathi nendawo ngakho-ke isinyathelo sokuqala akusona isinyathelo esihluke ngempela ezimbili thola futhi usebenzise ithuluzi lokufinyelela ngokushesha ngokunokwenzeka uzolithola ekhoneni eliphezulu kwesokunxele kwesikrini, abantu abaningi abalinaki ngisho nokukuqaphela okungukuthi njengoba likhona ukuqala, linokugcina nokulungisa nje.
Into yokuqala okufanele uyenze ukuyihambisa ngokuchofoza unxantathu ekugcineni kwesokudla bese ukhetha i-Show Blow Ribbon Manje isendaweni efinyeleleka kalula futhi ephawulekayo Leli yithuluzi lakho lomuntu siqu Ngokulandelayo kufanele wenze ngokwezifiso konke okwenziwa yi-Excel kungangezwa ku-Quick Finyelela kubha yamathuluzi. Izinketho ezijwayelekile njengokuhlola kuqala kokuphrinta netafula elisha kungangezwa ngokubheka inketho efanelekile kuhlu oluvela lapho uchofoza unxantathu ofanayo uma ufuna ukufunda okuthile okungajwayelekile nokungajwayelekile, yonke i-Excel ingayenza, khetha inketho yeMiyalo Engaphezulu oyiqalayo nginohlu lwemiyalo ethandwayo, kepha shintsha lokhu ukuze ubone yonke imiyalo futhi uzobe u-sp noma uqinisekile ukuthi ngizofaka inkinobho yokufaka yenani kubha yamathuluzi wami. Chofoza kathathu kwesokudla, uma usebenzisa ukuchofoza kwesokudla ukukwenza ube ngaphezulu kwalokhu uma ungasebenzisi inkinobho yokuchofoza kwesokudla noma ungayisebenzisi kaningi, ukuthola izinketho ezifanele ngokushesha futhi kalula, vele uzulazule ngaphezu kwento ofuna ukuyishintsha bese uchofoza kwesokudla.
Ngeke uhlale uthola inketho oyifunayo nemenyu yokuchofoza kwesokudla, kepha ikakhulukazi kunezinto ezithile eziwusizo, lezi ezine ukuthi eminye imisebenzi manje inamathebhu ahlukene avela kuphela uma kufanelekile.Izibonelo ezithile eziphawulekayo zifaka phakathi amashadi kanye amatafula we-pivot Nanku umdwebo engiwenzile ngaphambili futhi ungathola imidwebo kuthebhu ethi Faka manje lapho ngikhetha umdwebo kuvela amathebhu amadayagramu amathathu amasha lapho ungathola khona zonke izinketho eziqondene nomdwebo zezakhiwo ezintathu mhlawumbe eziwusizo kakhulu, kepha kukhona izinto ezinhle kuzo zonke ezifanayo kuya kumatafula e-pivot chofoza etafuleni le-pivot futhi amatafula amabili ama-pivot amasha bs avele inombolo yesihlanu sebenzisa okhiye abashisayo lawa afana namanje futhi kulula kakhulu manje Ukuthola ezinye izindlela zekhibhodi zokuzijabulisa nje chofoza inkinobho yomyalo owufunayo futhi lapho kunesinqamuleli sekhibhodi, i-Excel izokukhombisa yona encazelweni yenkinobho, ekugcineni i-Numbersix Thola Ama-Dialogs Endala Yilapho i-Excel iveza khona ifa layo langaphambilini ngibona kahle ukuthi wonke amabhokisi ebhokisi amadala asasetshenziswa kuzinguqulo ezintsha ze-Excel. Ngakho-ke uma ujikelezise umbhalo kuthebula lakho lamafomethi weseli, bese izinketho kuthebhu yokuqondanisa, konke ozokuthola yizithonjana zomcibisholo ezincane ezivela ekhoneni elingezansi kwesokudla kwezinye izingxenye zebheboni.
Ukuchofoza lezi zinkinobho kukuyisa emabhokisini ezingxoxo owaziyo futhi owathandayo kusuka kuzinguqulo zangaphambilini, okungasho ukuthi yindlela yakudala yeLuddite, ekunika ukufinyelela kuhlu oluphelele lwezinketho zesihloko esithile, kepha ungakwenzi ncamathela kulezo zingxoxo ezimbili ezindala emabhokisini, bheka ithebhu ethi Ikhaya, ungabona ukuthi i-Text Rotation manje inenkinobho yayo eyenza ukuthi isheshe futhi ibe lula kunakuqala, futhi lokho okwabanye abaningi ba-oda okufanayo. Kukhona ezinye izinto ezinhle nge-Excel 2010, kufaka phakathi ezinye izinto ezintsha, kepha ukuqonda kwalezi zindawo eziyisithupha kufanele ngabe uhamba ngendlela efanele
Ingabe kukhona isifaki seMicrosoft Excel 2003?
Isengezo esinamandla futhi esisebenziseka kalula sokubonisa amamenyu wakudala namabha wamathuluzi eMicrosoft Office 2003 kuRibhoni leMicrosoft Office 2007. I-Microsoft Excel 2007, iMicrosoft Word 2007, iMicrosoft ... Kulula ukuyifaka nokuyikhipha ...
Yini engingayenza nge-MS Excel 2003?
Nge-Excel Viewer, ungavula, ubuke, uphinde uprinte izincwadi zomsebenzi ze-Excel, noma ngabe awunayo i-Excel. Lolu hlelo lungabuyisa amaphasiwedi emibhalo ye-Excel - lungasusa nokuvikelwa kwephasiwedi kwamafayela. IBarcode XL isetshenziswa neMS Excel 97, MS Excel 2000, MS Excel 2002 neMS Excel 2003 neMS Excel 2007 neMS Excel 2010.
Ingabe kukhona isibukeli seMicrosoft Excel 2003?
Isibukeli 2003 kanye ... ne-Microsoft Office ... ye-Word, Excel, ne -... isengezo esinamandla nesisebenziseka kalula sokubonisa amamenyu akudala namabha wamathuluzi we-Microsoft Excel 2003 ku-Ribbon ye-Microsoft Excel 2007 .
Ngingayilanda kuphi i-Microsoft Excel mahhala?
I-Excel Export Professional ikuvumela ukuthi ubhale idatha esetshenzisiwe kumafayela e-Microsoft Excel 97, 2000, XP, 2003 XLS. ku-Microsoft Excel 97, 2000, XP, 2003 ... udinga ukufaka i-MS Excel ku ... ukuthekelisa ku-Excel, lokhu ... Bona ibhizinisi lakho ngendlela entsha ngokuphelele.